UTorrent | November 2019
Wụnye CentOS na VirtualBox
Editor Si NhọRọ November 19,2019
MediaGet vs. μTorrent: nke ka mma?
Mgbe nbudata BitTorrent malitere, onye ọ bụla amaola na ọdịnihu nke nbudata faịlụ sitere na Ịntanetị bụ nke a. Ya mere, ọ gbanwere, mana maka nbudata faịlụ iyi, ihe omume mmemme dị mkpa - iyi ndị ahịa. Ndị ahịa dị otú ahụ bụ MediaGet na μTorrent, na n'isiokwu a, anyị ga-aghọta nke kachasị mma.
Tulee uTorrent na BitTorrent
Ndị na-egwu egwu taa na-ewu ewu na ụwa n'ihi na ha na-enye nnukwu nhọrọ nke ọdịnaya maka nbudata. Ndị na-egwu egwu anaghị enwe sava ha - a na - ebudata ozi niile site na kọmputa 'ọrụ'. Nke a na - ebelata ọsọ ọsọ ahụ, nke na - emekwa ka a mara ọrụ ndị a.
Ebee ka arụnyere naTorrent
Mgbe mgbe, ndị ọrụ na-arụ ọrụ naTorrent, na-agbalị ịchọta folda ahụ e ji arụ ọrụ ya. Ihe kpatara nke a nwere ike ịdị iche: site na ịchọ nhazi faịlụ maka iwepụ akwụkwọ ntuziaka. Ejiri ụdị uTorrent nke ochie na ngalaba nchekwa ihe omume na usoro diski. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị onye ahịa karịa 3, lee anya n'ebe ahụ.
Otu esi eji usoro ihe omume maka nbudata ugbua
Ụdị faịlụ nke kachasị ewu ewu bụ netwọk BitTorrent, onye ọrụ kachasị na netwọk a bụ usoro uTorrent. Ngwa a enwetawo mmata n'ihi nrụpụta ọrụ dị n'ime ya, ntụgharị na oke ọsọ nke nbudata faịlụ. Ka anyị chọpụta otú e si eji ọrụ ndị isi nke onye ahịa na-enyefe oge.
Nsogbu nsogbu uTorrent download nsogbu
Ndị na-ejikarị ngwa uTorrent maara nke ọma na nkwụsịtụ na usoro nbudata faịlụ. Gini mere enwereghi ebunye faịlụ? Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. 1. ISP nwere nsogbu. Nke a na-eme, dịka iwu, ọ bụghị mgbe niile, mana ọnọdụ a karịrị njikwa nke onye ọrụ ahụ.
Melite mmemme uTorrent
Ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ndị ahịa mmiri dị iche iche na-ebudata faịlụ ndị dị mkpa na kọmputa. Otu n'ime ihe omume ndị kachasị ewu ewu bụ ụdị ọrụ. A na-emelite ya mgbe nile, na-agbasawanye ọrụ ya na idozi nsogbu ndị bilitere. Nke ahụ bụ otú imelite nsụgharị gaa na nsụgharị ọhụrụ maka n'efu, a ga-atụlekwa ebe a.
Gbanyụọ njehie gị "ụda nke mbụ anaghị etinye"
Ọ bụrụ na n'oge arụ ọrụ na uTorrent njehie "ụda nke mbụ agaghị arị elu" mere ma weghaara faịlụ faịlụ ahụ, ọ pụtara na e nwere nsogbu na folda nke ebudatara ya. Nke a na-eme mgbe nbudata na draịvụ ike mpụga ma ọ bụ ebe nchekwa ọkụ. Lelee ma ọ bụrụ na agbanyụla mgbasa ozi mgbasa ozi.
Port ọdụ na uTorrent
Mgbe ị na-ebudata faịlụ site na iji onye na-enye gị ohere, anyị nwere ike ịhụ akara ngosi ịdọ aka na-acha ọbara ọbara na ala aka nri n'akụkụ aka nri "Ọpụpụ ahụ adịghị emeghe (download ga-ekwe omume)". Anyị ga-agbalị ịghọta ihe mere nke a ji eme, ihe ọ na-emetụta nakwa ihe ị ga-eme. E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya.
Gbanyụọ njehie njehie "ohere ịgọrọ edere na disk"
Mgbe nbudata faịlụ, ederede na njehie disk na-egosi mgbe ụfọdụ na Torrent. Nke a na-eme n'ihi na ikikere na nchekwa ahụ ịhọrọ iji chekwaa faịlụ ahụ ejedebeghị. Ị nwere ike isi n'ọnọdụ ahụ pụta n'ụzọ abụọ. Usoro nke mbụ Mechie ndị ahịa mmiri. Na ụzọ mkpirisi ya, pịa bọtịnụ aka nri wee gaa "Njirimara".
UTorrent bụ otu n'ime software kachasị egwu maka nbudata faịlụ iji nweta netwọk (p2p). N'otu oge ahụ, ndị ahịa a nwere ihe omimi nke na-adịghị dị ala karịa ya ma ọ bụ na ngwa ngwa ma ọ bụ ịdị mfe nke iji. Taa, anyị na-atụle ọtụtụ "ndị asọmpi" maka Windows. BitTorrent Torrent ahịa si uTorrent mmepe.
Mgbe ị na - arụ ọrụ na onye na - enye gị ohere, ọnọdụ na - ebili mgbe usoro ahụ achọghị ịmalite ma ọ bụ site na ụzọ dị mkpirikpi ma ọ bụ ozugbo site na ịpị ugboro abụọ na faịlụ iberibe uTorrent.exe. Ka anyị nyochaa isi ihe mere uTorrent adịghị arụ ọrụ. Ihe mbụ na ihe kachasị kpatara ya bụ mgbe ngwa ahụ mechisịrị usoro usoro.
Ọnụnọ nke mgbasa ozi agbakwunyere na mmemme dịgasị iche iche na-ewute ọtụtụ mmadụ. Na mgbakwunye, ọ na-ewe ebe a pụrụ iji mee ihe, ma dọpụ uche. Nanị ọnụnọ nke mgbasa ozi bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwụghachi azụ nke onye ahịa kachasị ewu ewu na ụwa n'Ọsọ.
Bug na-edozi na cache n'elu na uTorrent
Mgbe ị na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ọtụtụ njehie nwere ike ime, ma ọ bụ nsogbu na mbido nke usoro ihe omume ma ọ bụ nkwenye zuru oke nke ịnweta. Taa, anyị ga-agwa gị otu esi edozie onye ọzọ nke njehie uTorrent. Anyị ga-atụle nsogbu nke mgbakọ cache na ozi "Nchekwa Disk karịrị 100%."
Otu esi edozi uTorrent maka nbudata ihe di iche
Na mgbakwunye na faịlụ na-agbanwe onwe ya, ọrụ kachasị mkpa nke iyi bụ nbudata faịlụ nke faịlụ. Mgbe nbudata, usoro ihe omume ahụ na-ahọrọ nchịkọta nchịkọta n'onwe ya. Dị ka usoro, nhọrọ a na-adabere n'otú ha dị. A na-ebubata ọtụtụ ebubata na usoro. Ọ bụrụ na ebudatara faịlụ buru ibu na obere ọsọ, mgbe ahụ, iwu nke iberibe ebubo adịghị mkpa.
ỊtọọTorrent maka ọsọ ọsọ
Nnukwu ewu ewu nke ndị ahịa ahịa na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mfe iji ma nwee interface enyi-enyi. Taa, onye ahịa a bụ ihe kachasị na-akwado ma na-akwado ya niile ndị na-aga n'Intanet. Isiokwu a ga-akọwa usoro ịmepụta ngwa a. Ekwesiri ighota na nke a bu usoro di mfe na nke oma.
Nwepu mmemme maka nbudata ụda uTorrent
Mgbe ụfọdụ, achọrọ ka ị nwee ike ọ bụghị naanị ịwụnye mmemme, kama iji wepu ha. Na nke a, ndị ahịa mmiri abụghị ndị ọzọ. Ihe kpatara nhichapụ nwere ike ịdị iche: nkwụnyeghị ekwenye, ọchịchọ ịgbanye na usoro ọrụ ọzọ, wdg. Ka anyị tụlee otu esi wepu iyi na-eji ihe atụ nke onye ahịa kachasị ama nke netwọk faịlụ a, uTorrent.
Idozi nsogbu site na iguta kaadi nchekwa na ngwaọrụ di iche iche
Ịmepụta diski ike dị na Windows 10, 8.1 na Windows 7
Software maka igbutu chipboard
Wepu aha na email
Bug idozi na comctl32.dll
Roskomnadzor na-aga n'ihu na mgbagwoju anya ya nke ọma na onye ozi Telegram. Nzọụkwụ ọzọ iji gbasaa nnweta ọrụ na Russia na-egbochi ihe dị ka puku adreesị IP nke ngwa ahụ na-eji. Dika akporo Akket.com, oge a adreesị nke adi n'ime subnet 149 abanyela aha Roskomnadzor. GụKwuo
Ntuziaka bara uru nke na-agbanwe ihe nkpuchi na Photoshop
Ngosipụta ezighi ezi nke onyinyo ahụ na kọmputa nyochaa